Fitaovana rano manalefaka tsara indrindra ho an'ny mpamokatra rano sy fanamboarana rano | Manfre
Ny manalefaka rano mandeha ho azy dia mpanamontsana rano-fifanakalozana ion miaraka amin'ny fanaraha-maso mandeha ho azy mandritra ny fandidiana sy ny fanavaozana. Izy io dia mampiasa resin-tsolika misy karazana sodium hanesorana ny ion-kalsiôma sy magôniôma ao anaty rano ary hampihena ny hamafin'ny rano mangatsiaka hahatratra ny tanjon'ny fanalefahana rano mafy sy hisorohana ny gazy karbonika ao amin'ny fantsona. , Ny fandrindrana ny kaontenera sy ny vilany. Mitsitsy be ny vidin'ny fampiasam-bola raha manome toky ny famokarana. Amin'izao fotoana izao dia efa be mpampiasa amin'ny famatsian-drano misy koba-etona isan-karazany, vata fampangatsiahana rano, mpamadika hafanana, mpiorina etona, etona etona, motera mivantana ary fitaovana sy rafitra hafa. Ho fanampin'izany, izy io dia ampiasaina amin'ny fitsaboana rano an-trano, fitsaboana rano amin'ny indostrialy ho an'ny sakafo, elektrôlika, fanafody, indostrian'ny simika, fanontana sy fandokoana, lamba, elektronika, sns, ary koa ny rafitra fananganana desalination. Ny hamafin'ny rano vokarina aorian'ny fitsaboana azy amin'ny alàlan'ny fanamainana rano tokana na sehatra maro dia azo ahena be.
Misy teknolojia fanalefahana rano ampiasaina matetika ho an'ny fanalefaka rano. Ny iray dia ny fanesorana ny ion-kalsioma sy manezioma ao anaty rano amin'ny alàlan'ny resins fifanakalozana ion mba hampihenana ny hamafin'ny rano; ny iray hafa dia ny teknolojia TAC nanocrystalline, izany hoe Template Asisted Crystallization (modely crystallization manampy), izay mampiasa nano Ny angovo avo lenta vokarin'ny kristaly dia mameno ny kalsioma, maneziôma ary ionan'ny bicarbonate ao anaty rano ao anaty kristaly marindrano nano, ka manakana ny maimaim-poana Ion avy amin'ny ambaratonga miteraka. Raha ampitahaina amin'ny rano amin'ny paompy dia misy tsiro sy fahatsapana mazava be ny rano malefaka. Ny rano malefaka dia misy atiny oksizena avo sy henjana ambany. Izy io dia afaka misoroka tsara ny aretin'ny vato, mampihena ny enta-mavesatra amin'ny fo sy ny voa ary mahasalama.
1. Ny diplaoma avo lenta, ny toetran'ny famatsian-drano maharitra, ny androm-piainana lava, ny mandeha ho azy mandritra ny dingana iray manontolo, mila manampy sira tsy tapaka fotsiny, tsy misy fitsabahan'ny tanana.
2. Fahombiazana avo, fanjifana angovo ambany, fandaniana ara-toekarena.
3. Ny fitaovana dia manana rafitra matevina sy antonony, fandidiana sy fikojakojana mety, toerana kely misy ny gorodona ary fitehirizana vola.
4. Mora ampiasaina, mora apetraka, debug ary miasa, ary milamina ny fahombiazan'ny singa fanaraha-maso, ahafahan'ny mpampiasa mamaha ny ahiahiny.
Teo aloha: Harato fanoherana ny vorona ampiasaina hanakanana ny vorona tsy hanakona sakafo
Manaraka: Sivana fanaovan-gazety tsy manara-penitra ho an'ny indostrian'ny ranomanitra
Fitsaboana rano madio
Milamina Fitaovana rano
Cartridge tapitra farany Endahana amin'ny vovoka welding